Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0912 lat
Alatsinainy 26 Nov.
Mampiasa sary maromaro ny Tesamenta Vaovao hilazana ny hevitry ny batisa. Voalohany, ny batisa dia tandindona maneho ny firaisana ara-panahy amin’i Kristy (Rôm. 6:3-8). Tafiditra ao ny fandraisana anjara amin’ny fahoriany, ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fandaozana ireo fomba fiainana teo aloha. Amin’io lafiny io ny batisa dia mifamatotra amin’ny fibebahana sy ny famelan-keloka (Asa 2: 38); ny fahateraham-baovao sy ny fandraisana ny Fanahy Masina (1 Kôr. 12:13); ary vokatr’izany dia ny fidirana ho anisan’ny fiangonana (Asa 2:41,47).
Ny batisa dia tandindon’ny fifandraisana ara-panahy arahana fanoloran-tena amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Kristy (Kôl. 2:11,12). Maneho izay asehon’ny famorana ao amin’ny Testamenta Taloha ny batisa. Ny batisa ihany koa dia maneho fialana amin’ny toerana nisy teo aloha ka mankamin’ny iray hafa, izany hoe tafafindra ao amin’ny fiaraha-monina anankiray voatokana hanompo an’i Kristy ny olona anankiray. Ny fandraisana ny Fanahy amin’ny batisa no ahazoan’ny mpino manompo ny fiangonana sy miasa ho famonjena an’ireo izay tsy mbola ao anatin’ny finoana (Asa. 1:5,8).
Taona maro lasa izay, dia nisy fanambarana nanaitra ny saina nataon’ny kômity mitambatra teo anivon’ny fiangonan’i Angletera mikasika ny Batisa sy ny Kônfirmasiô ary ny fandraisana ny Kôminio masina. Izao no voalazan’ny fanambarana: “Raha ny tokony ho izy, dia olon-dehibe no atao Batisa fa tsy ny zaza ary tsara hamafisina fa tsy misy porofo mazava velively ao amin’ny Testamenta Vaovao ny amin’ny tokony hanaovana Batisa ny zazakely.” - BCT, t. 1102. Raràn’ny hevitry ny hoe batisa ny fanatanterahana izany amin’ny zazakely. Mitaky finoana sy fibebahana mantsy izany raha ny batisa ara-Baiboly no resahina. Etsy an-danin’izany, ny fananan’ny Tenin’Andriamanitra anjara asa eo amin’ny fitomboan’ny finoana (Rôm. 10:17), dia milaza fa tsy maintsy ampiarahina amin’ny fampianarana ara-Baiboly sy ara-panahy ny fibebahana. Tena ilaina ireo lafin-javatra ireo mba hamoa “voa miendrika ny fibebahana” (Lio. 3:8) ireo mpanolo-tena hatao batisa ho porofon’ny fifandraisany amin’i Kristy.
Manampy antsika hahatakatra ny fahasamihafan’ny fanompoam-pivavahana sy ny sakramenta ny toetry ny batisa. Ny batisa araka ny hevitr’ireo izay manao izany ho sakramenta, dia fomba iray hisian’ny fiovana ao amin’ny olona hialany amin’ny fahafatesana ara-panahy ho amin’ny fiainana. Tsy dia zava-dehibe loatra ny resaka taona araka io fahatakarana io, satria toe-javatra arahin’ny hery mihoatra ny an’ny olombelona izany. Etsy an-danin’izay kosa, ny batisa amin’ny maha-fanompoam-pivavahana azy, dia marika na tandindon’ny fiovana anaty (toe-javatra arahin’ny hery mihoatra ny an’olombelona), izay efa nitranga teo amin’ny fiainan’ilay mpino tamin’ny alalan’ny fanandramany niaraka tamin’i Jesôsy. Raha io fomba fijery io, ny mpanolo-tena ho amin’ny batisa, dia tokony ho efa nanandrana sahady ny finoana an’i Kristy. Manjary zava-dehibe tokoa noho izany ny hoe iza no atao batisa sy ny hoe amin’ny fotoana manao ahoana.
Raha efa vita batisa ianao, dia saintsaino ny fanandramana nolalovanao tamin’izany. Rehefa takatrao ny hevitr’izany, nahoana isika no mila atao “batisa” (amin’ny heviny anankiray hafa) isan’andro? Ahoana no hahazoana manatanteraka izany?